Idealism yaRabhi Moshe Rat - Rabbi Michael Avraham
Idealism yaRabhi Moshe Rat
Responsa > Category: Philosophy > Idealism yaRabhi Moshe Rat
Kobe Yakabvunzwa 7 months ago
Ini ndaida kubvunza zvaunofunga nezve system yekufungidzira inotsigira Moshe Rat,
Maonero epasirese aanopa, anopikisa zvakafara kuti chokwadi chese ndechepfungwa, chibereko chekuziva kwevanhu, izvo zvinobuda kubva mukuziva kukuru kwaMwari.
Mune mamwe mazwi, chokwadi imhando yekurota kuripo mukuziva kwemunhu, chokwadi chete chiroto chakagovaniswa nevanhu vese, uye kwete yako.
1. Izvi zvinobva, pakati pezvimwe zvinhu, pane zvidzidzo kubva ku quantum (zvichida zvine chokuita nemigumisiro yekucherechedza pazviyero, nezvimwewo).
2. Uye senyanzvi dzefizikisi dzinozivisa kuti kuedza kugadza kuvapo chaiko kwechinhu kwakakundikana, uye kana zvakadaro chokwadi chiripo chete kuziva. Mupfungwa.
Zvakare, mumamiriro ezvinhu apo kushanda kwehuropi kunodzikira uye kwakaremara - vanhu vanosangana neruzivo rwakakura rwekuziva kupfuura mamiriro akajairwa.
Semuenzaniso mune zviitiko zvekupotsa kufa kana pasi pesimba reimwe mishonga. Uye saka inoswedera kune iyo yekutanga superconscious. ~ / Imwe kubatana. Uye zvimwe.
4. Uyezve, nokuti pane zvikonzero zvakawanda zveiyi nzira, uye zvakare iri nyore iye anotaura kuti inofanira kuvimbwa.
5. Uye maonero enyika chaiwo haana njere. Saka pachinzvimbo chekuomerera nemaonero enyika emuMiddle Ages, munhu anogona kushanduka kusvika pakufambira mberi kwemafungiro.
(Ndinofungidzira kuti ane dzimwe nharo dzakawanda asi chaizvoizvo dzisina kuiswa mune dzose).
Kubva pamaitiro aya, pane vatove vanovaka marudzi ese emamodheru kutsanangura chokwadi.
Ngatiti uropi, maererano neCastrop nzira, inongova "nzira iyo pfungwa yedu inotarisa kune mucherechedzi wekunze." Pfungwa nekuziva hazvisi zvinhu zviviri zvakasiyana, asi pfungwa inoonekwa uye inobatika inomiririra yekuziva.
Mibvunzo ma tag: Idealism, Moshe Rat, Castrop
Rabbi Moshe Rat aimbove mudzidzi uye ndinomutenda zvechokwadi. Ini handigoverane nezvakawanda zvemafungiro ake uye kunyanya maitiro ake ekufungidzira uye mafungiro. Nharo dzawakanyora pano muzita rake (handizivi mashoko acho. Handina kuverenga) dzinoita sedzisina hwaro zvachose kwandiri, kusanganisira hwaro hwadzo hwesainzi.
Kutaura kwekuti chokwadi chiroto chiripo mukuziva kwemunhu kunoratidzika kwandiri kunopesana. My personal consciousness Ndiani? Zvangu? Ndinoreva kuti ndiripo here? Ini chete ndiripo? Sei uchifunga kuti ini ndega ndiripo uye vamwe vese havapo? Uye zvimwe chokwadi hazvidaro? Uye Mwari arikowo? Anoziva sei?
Uye kana iri iyo "sainzi" hwaro, ini handina kunzwisisa kuti kubatana kune quantum kwaive chii. Mhedzisiro yekuyera pane chokwadi mubvunzo wakaoma, asi maonero akapatsanurwa pamusoro payo, uye zviri pachena nhasi kuti "chiyero" hachidi kuziva kwevanhu (kunyangwe kuyerwa nekombuta kunokanganisa basa remafungu), zvinopesana nezvinogamuchirwa. mumabhuku akakurumbira. Uye zvinoshamisa.
Kobe Akapindura 7 months ago
Handichisiri mukutaura kwake kwose, asi kubva pane zvandakasangana nazvo muchidimbu pamusoro pavo, ane zvimwe zvishoma zvaanoreva panzvimbo yake inorondedzera.
Chokwadi anofungidzira kuti vamwe vanhu variko. Asi sekurota chero munhu anogona kurota seizvi munyika yedu kuziva kurota pamwe chete mune inoziva svikiro. Zvinoratidzika kwandiri kuti muenzaniso wemhando yemutambo wekombiyuta unogona kuenzanisira mazwi ake nenzira yakanaka. Ini zvakare ndinowanzo funga kuti ndeye nzira yemetaphysical kune chokwadi uye inzira inowirirana.
Chii chakandiomera panhau iyi, munofunga kuti munofanira kukurukura sei nyaya iyi? Kana kuti panyaya dzakadaro?
Mapato angaunzwa sei chaizvo pano kana uko? Uye funga mhedziso uye uite sarudzo.
Mushure mezvose, zvakajeka kune wese kuti maererano neKant hapana humbowo hwekuvapo kwechadenga chaicho nechinhu pachacho (Nuumana). Asi isu tinogara tichisangana chete nechiitiko (kunze kwekuvapo kwedu chaiko)… Asi zvino sei zvinhu zvakapetwa kaviri uye usingafungi kuti chiitiko chete ndicho chinoshanda? (Senge rudzi rweOakham reza kana iri pano zvachose)
Ndaona kuti mubvunzo wako unobva pamateru anotsvedza maererano nekusagutsikana kwamuka, uye pamwe wadhiropu;).
Asi, hazvina kujeka kuti zvinofanirwa kuuya pano nekuti haisi nzira yekukahadzika, asi dudziro yemetaphysical yechokwadi.
Pamwe ndichabvunza zvakapesana nazvo, sei murabhi achifungidzira hunyambiri uye kuti vamwe vanhu varipo uye kuti G-d ariko?
Ndinofunga kuti "zvinotaridzika" kwaari. Uye hapana chikonzero chekukahadzika uye kazhinji kunzwisisa kwake uye manzwiro aiwa? Asi iyo pfungwa yechiitiko chinopa tsananguro izere yezvinhu izvi haisi yekukahadzika nekuti inoita senge * kududzira * / imwe nzira. Kana kuti hazviratidzi here kwauri kuti ichi ndicho chirevo chakarurama (nokuti pakupedzisira chinopesana nemafungiro ekuti kune tafura pamberi pedu)?
Ndafungawo kuti angave ari maBohrs amakataura muchikamu 383 akaoma chaizvo kushandisa dudziro iyi mukuita, nekuti mutauro usina mazita (kunze kwevamwe vanhu) asi nemazwi echiito nemaumbirwo awo. Asi kune rumwe rutivi, zvinoratidzika kuti kunyange mumutambo wekombiyuta tinobata zvinhu sezviripo. Uye kana zvakadaro zvakare kuwirirana kunoratidzika kunge kunoenderana uye kwakabatana.
Mutongi wekupedzisira Akapindura 7 months ago
Saka pane kugunun'una mashoko, aitsika pamusoro pedenga remba anozviwisira parufu obva apepuka kubva kuhope. Kana kuti aizotarisira kudzima simba rinokwevera zvinhu pasi muchiroto chake otivhurira mota dzekurota dzinoyangarara mumhepo.
mikyab Vashandi	Akapindura 7 months ago
Usanzwisisa mazwi aya, uye zvirokwazvo hauzive kuti ungaakurukura sei (kana kuona chero pfungwa pakuita kudaro).
Sorry nekunonokerwa ndanga ndangobatikana ndakuda kutaura.
Handina kunzwisisa nhamba yezvibodzwa mumutsetse uyu.
1. Kutanga kune kusanzwisisa kwemazwi.
Ko murabhi anganzwisisa here pfungwa yekuti nekuti chatinongoziva chete "maonero" edu uye kwete chinhu chacho. Saka zvinogona kutaurwa kuti chokwadi zvese zviripo kunze kwevamwe vanhu, zvinongori mukuona kwe "kwedu". Uye isu hatifanire kuwedzera kune hypothesis kuvepo kwechinhu sese. ~ Sekurota. Apa chete kuti ihope dzakabatana.
2. Saka izvozvi tine sarudzo mbiri dzekutsanangura chokwadi.
A. Ndinoona tafura uye zvechokwadi kune "zvinhu zvakadaro" kunze kwandiri.
B. Ndinoona tafura, asi chaizvoizvo iri mukuziva kwangu chete uye kwete kunze. Anofananidzwa ipapo nechinhu chinoronga izvi ngatitii Gd. Uye coordinator kuitira kuti vanhu vakawanda vazvionewo. Rudzi rwemutambo wehondo wekubatana pakombuta.
Kana zvakadaro, tsananguro "yakarurama" ingasarudzwa sei?
Mushure mezvose, zvichave maererano nemamwe etuities anoti kuna A. kuti nyika yakadaro iripo. Uye kuna B. kuti hatisati tambosangana nenyika ino neimwe sese asi takagara tichisangana nayo kuburikidza nekuona.
Zvinoita sezvine musoro kusarudza tsananguro iri nyore kana ichitsanangura iyo data imwechete uye kana zvakadaro zvakakodzera kusarudza B. Asi hazvisi pachena kwandiri kuti izvi ndezvechokwadi chete munyaya iyi. Uye kunyanya methodologically. Asi pano vanhu vazhinji vanofunga saA.
Uye kana zvakadaro, ndinobvunza kuti zvakakodzera uye zvine musoro sei kukurukura nyaya iyi.
Zvakasiyana, kana murabhi asingazivi mataurirwo azvo, zvino sei achifunga kuti Rabhi Moshe haana kururama uye ari pachokwadi??
3. Sei musingaoni pundutso munhaurirano iyi? Imhaka yekusakwanisa kukurukura (uye kana zvakadaro, zvino munhu angataura sei nezve "kukanganisa" kweiyi nzira). Kana kuti nekuti hapana NFKM (asi kunyangwe izvo zvisiri izvo, pane zvakawanda pane iripo uye yehuzivi nhanho, sekureva kwevanotsigira nzira iyi)
4. Munyama, zvinobvira kuunza marudzi ose euchapupu sezvo chinhu chikuru chiri chaizvoizvo minda, uye kuti vanozvibata nenzira yechienzi (yakadai sokukurumidza kupfuura kukurumidza kwechiedza, uye kukurumidza kusingagumi, kuchengetedzwa kwechaji kunoratidza mitemo yokunze. kune zvakasikwa, nezvimwewo). Uye hazvipo sezvinhu chaizvo asi se "zvinogoneka" kana munda. Uye zvakadaro vane mhedzisiro muchokwadi. Ndinofunga kuti kune vanowana Mwari mune izvi. Izvo zvinoumba minda kana mitemo yezvisikwa pase.
Pano chete tora imwe nhanho mberi sechikamu chekuziva kwakagovana.
Regererai kunonoka, asi zvinonetsa kukurukura, kunyanya sezvo muri kudzokorora zvinhu zvandakatsanangura. Ndichapindura muchidimbu.
1. Ndakatsanangura kuti ndaisanzwisisa mashoko acho. Kana pasina chiripo saka neniwo handina. Saka kuvapo kwangu kuri mukufungidzira kwaani? Zvangu? Zvino kana uchiti ndiripo uye vamwe vese vasipo, zvino wawanei? Kana iwe uchitofungidzira kuti chimwe chinhu chiriko hapana chikonzero chekusawedzera kuti zvimwe zvinhu zviripo. Mushure mezvose, iyi ndiyo intuition yedu.
2. Tsananguro yakarurama ndiyo inoratidzika kwandiri inonzwisisika.
3. Zvechokwadi, haigoni kukurukurwa. Izvi hazvirevi kuti hapana chokwadi pano. Iyi yekufungidzira haisi yechokwadi mumaonero angu, uye haigone kukurukurwa. Ndizvo zvakaita mutemo we causality mumaonero angu uye hazvisati zvaita kuti tikurukure kana kuratidza kune avo vasingazvigamuchire.
4. Hapana chekuita nefizikisi. Fizikisi haitauri kuti zvinhu hazvipo, asi kuti hazvisi izvo zvatinoona kuti ndizvo (uye hazvina chokwadi).
Aya ma quibbles haana kunyanya kunakidza uye ini handioni chikonzero muhurukuro iyi.
Cannabis Akapindura 7 months ago
1. Izvi hazvisi zvechokwadi zvachose nokuti hongu vanobvumirana kuti vamwe vanhu varipo, uye kukanganisa kuri mukududzira kwedu kwechinangwa chekuvapo kwezvinhu zvekunze izvo zvisiri kuziva.
2. Ndinonzwisisa, zita iri chete rakavakirwa pakuwedzera zvirevo uye kuti kana zvakadaro vandudza kutanga kwekutanga. Semhando yehumboo hwehuzivi uye kufumura kuna Gd.
3. Kurukurai kana muchireva kugona kuita mhedziso uye tarisai kana pane kuperera uye kubatana mukusaziva? Asi kana zvirizvo, unofungei nezvekutaura kwako kuti unonyatsoona kufarira rhetoric. Uye muhurukuro huru ...
4. Zvakanaka, iyi inyaya inofadza inouya yakawanda muzvinyorwa zvakakurumbira uye pano panzvimbo ino inouyawo nguva nenguva, inoshandiswawo nevanhu vechitendero mune imwe nzira, uye mafungiro mune imwe nzira, asi. Narali inoda kuwedzera mubvunzo pachayo.
1. Kubva pane zvaunoti kune vamwe vanhu? Uye kuti pamusoro pavo une ruzivo rwakananga, kusiyana nechinangwa chekuvapo kwematafura?
3. Ndakatsanangura munzvimbo dzakawanda kuti rhetoric ndeyei. Aya ndiwo zvirevo zvekuti hapana nzira yekuongorora, nekuti ani nani anovasimbisa acharamba chero gakava nenzira imwechete (zvichida iyi ingori fungidziro yangu). Naizvozvo handisi kuona chikonzero muhurukuro iyi.
1. Ndinofunga zvinogona kukakavara zvakanyanya zvichibva pane intuition. Asi kana zvakadaro, taura kuti tafura iripo chaizvo yakadaro.
Saka tora. Unoona chimwe chinhu chiri nani here?
2-3. Ndatenda. ikozvino ndazviwana.
4. Sezvandambotaura maererano nehukama huri pakati pesayenzi yemazuva ano nesayenzi uye uzivi nedzidziso yebhaibheri, ndingada kubvunza, chete ndingada kumbopfuura donho pamusoro pechidzidzo chekutanga. Nokuti inowanikwa zvikuru mumabhuku nemabhuku akakurumbira. Nepo kutaura kwako pano kuchikatyamadza (fizikisi yemazuvano ingatoratidza kuti zvinhu zvatinoona zvakadaro). Dai ndisina kuburitsa zvizere chinangwa chako mune pamwe kutenderera 🙂
Kutendeseka ndinofunga iyi inyaya yakakura yakakwana yekoramu kunyanya iwe uri chiremba mairi.
Join vamwe 3,094 vanyoreri
Nezve column 36
Kugadzira rutendo mukunzwisisa muvanhu vasina njere
Sekuru On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)
Ori On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)
Haim On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)
Michi On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)